Goverana yako Linux ruzivo | Kubva kuLinux
Goverana yako Linux ruzivo
Kunyora bhurogu, kuchengeta mese muri kuvandudzwa, mazuva ese, pasina kubhadharisa peni, ibasa rakaoma kwazvo. Zvinosanganisira kunyora Mugovera neSvondo kunyangwe muimba yekugezera, kunyangwe pazororo rangu kana kana pandinoenda kunze kwenyika kunoshanda. Ehe, icho chidiki chinozivikanwa chiito chekuda, sekungofanana nebasa rakanaka revaya vanenge vasingazivikanwe programmers vanogadzira yemahara software. Izvi, mukuwedzera, zvakagadzirwa mune mamiriro umo vashandisi / vaverengi vari kuramba vachida, uye nechikonzero chakanaka.
Iyi sumo haina kutsvaga kupa tsitsi kana kusiya mitsara yekutenda, asi asi kukurudzira avo vasati vapa rubatsiro munharaunda kuti vaite saizvozvo. Izvi zvinoreva kusiya maitiro ekungogarawo ayo dzimwe nguva anotigonera.
Nhasi ndanga ndine epiphany, rudzi rwekuzarurirwa: chinhu chakakosha nharaunda. Icho ndicho chinhu chinodyisa yemahara software. Muchokwadi, izvi zvinoreva kuvhura software kunharaunda uye ndiye iye anoipa hupenyu. Isu tinozviona mune iwo mapurojekiti ayo, sezvo vasina nharaunda yakakosha, vanowira mukukanganwa.
Zvino, iwe unovaka sei nharaunda? Mhinduro iri mumubvunzo. Kuvaka kunoreva kuita. Asi chiito chaani? Pane mashoma? Zvese? Ipapo ndipo pane musiyano uripo pakati pemarudzi akasiyana enharaunda.
Zviripachena, mundima yemahara software kana tichitaura nezvenharaunda tinotaura nezvekukosha kutora chikamu kwevazhinji venhengo dzayo. Ndiwo mhando wenzanga yandinoda kuve chikamu chayo uye ndinotenda kuti, nechikonzero chakarurama, tinogona kupokana kuti ndiyo mhando yenharaunda zvinoenderana nehungwaru hwesoftware yemahara.
Mumwe anogona kutora nzira dzakawanda uye munzvimbo zhinji, zvirokwazvo vazhinji venyu muri kutozviita. Kugadzira mupiro wekodhi pano, dudziro ipapo, nezvimwe.
Pfungwa yangu kuvhura mikova yeiyi blog, iyo mushure mekuedza kukuru yave tsanangudzo mukati me yemahara software nharaunda. Ndiri kuda kuti iwe uzive kuti pano une mugero wekutsikisa nekukurumidza uye pasina kunetsekana chero mupiro waunoda kupa. Ivo havafanirwe kuve mabloggi kana nyanzvi dzeLinux, ingova nechimwe chinhu chinotonhorera kugovana nekuchinyora pasi.
Pfungwa ndeye kugadzira kukwikwidza kwevhiki nevhiki. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutitumira isu a email nazvo mini muperekedzi, izvo muromo, nezvimwe. (mukati yakajeka mavara fomati) zvavanofunga kuti zvakakosha share. Isu tinotarisira kumisikidza, kuiburitsa uye nekupa kubvuma uye kubvuma kwenyaya yacho, hongu.
Iwe unoda here kuita yako zvishoma?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Goverana yako Linux ruzivo
Jose Antonio Costa de Moya akadaro
Zvinoita kunge chikuru chirongwa chekujoinha. Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, iwe unogona kuzviraira uye woita wiki.
Pindura José Antonio Costa de Moya
Solidrugs Pacheco akadaro
chakanakisa 😀 kuramba uchikura, iyi blog inongedzo huru kwandiri semushandisi we linux, handizvitore kana ndiri nyanzvi kana novice, nekuti hatife takarega kudzidza 😀 kwaziso
Pindura Solidrugs Pacheco
Luis Lopez akadaro
Ini ndinofunga iri zano rakanakisa, uye ndinonzwisisa mamiriro ako. Ini ndinonetseka kuchengetedza diki blog iyo yandakatanga nguva pfupi yadarika uye basa racho rinonetsa ...
Kugovera kunharaunda chinhu chandinofarira zvakanyanya, saka ndichatanga kufunga nezve chimwe chinhu 🙂
Iwe waita basa rakanakisa neino saiti, makorokoto uye anofara!
Kwaziso kubva kuUruguay
Pindura Luis López
Ini ndinonyatsoda kukukorokotedza iwe, isu tinoziva basa uye kuzvipira kunodiwa kuchengetedza blog nehunhu hwe "Ngatishandise Linux" nemipiro yakanaka kwazvo. Saiti senge idzi dzave kuitika iye zvino kupfuura nakare kose kuti avo vari kune rimwe divi vari kuwedzera kuvharwa uye kuyedza kuzvitonga kunyangwe diki komputa sosi.
Munyika yangu, ini ndinoedza kusimudzira yemahara software nezvose zvandinogona, kunyanya "Ubuntu" izvo zvandinofunga zvinoshamisa uye zvakawanda zvezvandinoburitsa pane yangu Face peji, ndinobvuma, zvinobva kune ino blog.
Pfungwa iyi yakanaka uye ndinovimba inowana maungira munharaunda, sezvo simba re "Nharaunda" iri chaizvo mukutora chikamu kwenhengo dzaro dzese. Mberi…
croaker anurus akadaro
Nhasi uno mablog mazhinji anobatsira kushandisa yedu sisitimu, kubva kwazvino kuzvivandudza isu, zvisinei zviri nyore kana iri yepakati mune imwe kana bhurogu imwechete, ndosaka ndichigara ndichitarisa kune ino blog uye zvirokwazvo kune vanhu vazhinji vanogona kushandira pamwe nekugovana ruzivo, ini handizive Kana ndikakwanisa kubatsira nechimwe chinhu, ndinofunga kuti muGIS ndinogona kunyora chinyorwa, kunyangwe paine mamwe mablogi anoita zvakafanana, zviri pachena ndezvekuti iyi blog yakanyatsonaka kune avo vedu vashandisi, kuedza uye kuzvipira zvachose, chinhu chega chinosuwisa ndechekuti uve nevanhu vashoma vanozivikanwa padhuze newe vanoda kushandisa linux pane desktop yako kana notibhuku, kunze kwekutamba pane yako nhare mbozha ne android uye hapana chimwe chinhu.
Pindura kuna anuro croador
Mazvita Eider… ndozvazviri… basa risingawanzo kuzivikanwa uye rinonetsa zvikuru… ndosaka mablog akawanda nezveLinux achifa kunze kwemwedzi mishoma…
Joel Almeida Garcia akadaro
Ini ndinowedzera kuti inharaunda yechirongwa, kwete ye "distros war" kana "desktop environments", asi kuti ive nhandare kana "buffet" umo isu tese tinogona kuona akanaka uye asina kunaka mativi, kunyangwe sevashandisi zano rakajeka remisoro.
Pindura kuna Joel Almeida García
Luis Adrián Olvera Facio akadaro
Mhoro shamwari, ndangotumira mupiro wangu ndinovimba uye uchashandira vazhinji. Chisarai
Pindura Luís Adrián Olvera Facio
Eduardo Campos akadaro
Inofanirwa kunge iri linux zvakajairika, kana inogona kutariswa kune imwechete distro (iyo yausingatombo shandisa)?
Pindura Eduardo Campos
Ngirozi J. Mota akadaro
Mhoroi, ini ndinoshandisa iyo BackInTime application muUbuntu 12.04 lts, ​​asi kana ini ndichiedza kumisikidza ichi chishandiso muUbuntu 12.10 iyo .gvfs dhairekitori haigone kuwanikwa uye nekudaro handigone kumisikidza iyo application. Ndatenda pamberi nekuti ndinoziva kuti unogona kundibatsira.
Pindura kuna Angel J. Mota
Zano rakanaka kwazvo uye kurudziro yakanaka yekuenderera kumberi !!
Eider J. Chaves C. akadaro
Ini ndinongoda iwe kuti ndirege ndikutende nekugovana ruzivo rwako! … Kushanda nesimba !!!
Pindura kuna Eider J. Chaves C.
Jorge Ruiz akadaro
Zvakanaka, kokero ndeiyi: "Ngatishandise Linux"
Uye kugovana ruzivo, hazvitipe chinhu uye isu tinogona kuwana yakawanda mukudzoka!
Pindura Jorge Ruiz
Ndakagadzira mamwe madhairekitori ekushandisa libreoffice iyo yandiri kushanda muboka remuno, tinoita sei nazvo?
Ikoko ndakasiya chinongedzo ini ndichijekesa kuti iwo madhairekitori andinofanira kuagadzirisa uye ipapo iwe hauna kunyatsonaka tingaitei nazvo?
Ini ndinobvuma, iwe unofanirwa kupa chimwe chinhu ...
Pindura ku steve
Ini ndoda kuwedzera kuti dzimwe nguva vanhu vazhinji vanoda kutanga yavo blog, kuti vagone kugovana ruzivo rwavo nenzira iyi. Asi pakupedzisira iyo blog inopera mu "hapana", yechinyakare isina chero posvo, kana nezvimwe zvakanaka kwazvo zvinyorwa asi ivo havana kupatsanurwa kwakanaka uye iwo maposta pakupedzisira haana kusvika kune chero munhu (kana vanhu vashoma chete) yemahara software nharaunda vaisaziva Ini ndinobatsirwa zvakanyanya, sezvo ndisinga svike vanhu vazhinji. Kunze uko kana tisina nguva yekubhanga chii kuchengetedza blog iri nzira yakanakisa yekusvikira vanhu vazhinji ndeiyi nzira. Kubatsira anozivikanwa mablogiki uko kune kwakawanda kuyerera kwevanhu uye sezvazvinotaura pamusoro apa ivo vachange vari mutariri wekukupa iwe wese kuvonga nekuisa zita remunyori uyo akatora dambudziko kuzviita achipa icho chakakodzera kukosha kana saka ndinofungidzira hehe. Mufaro
Pindura kune chango
Rodny Silgado Cabarcas akadaro
Chirevo ichi chakanakisa, mazuva maviri apfuura ndakaita bhurogu nekuda kwekuti ini ndawana chimwe chinhu chatove muUbuntu icho mushanduro yayo 12.10 yakave neshanduko diki uye mushure mekuiburitsa ndakafunga, chii manje? Handikwanise kuramba ndichichirera, handina nguva. Ichi chikumbiro chaizove chakakwana.
Pindura Rodny Silgado Cabarcas
Kwakanaka danho, ndinotarisira kune vazhinji vashandisi vanokurudzirwa uye vanotumira zvipo zvavo, nekudaro blog rakasiyana siyana richawanikwa.
Ini zvakare ndinofunga kuti chifananidzo chakakosha zvakanyanya, vamwe vatangi vanonetseka nekuona yakachena zvinyorwa uye ini ndinofunga zvingave zvakanaka kana chidiki chifananidzo chakawedzerwa shanduko. Pakutanga kutumira kunogona kunetsa asi nekufamba kwenguva nekutsvagisa unodzidza maitiro aungaita kuti uvandudze uye kuti basa rako riwedzere kuverenga.
Pindura kune antares
Nyowani ASUS F201E netbook ine Ubuntu pre-yakaiswa
Kubva pakuona kwangu: Chii chinonzi DesdeLinux chinobatsira munharaunda yenyika?